यी राशिका लागि निकै शुभ मानिन्छ कालो रंग ? खुलाउँछ भाग्यको ढोका – Sandesh Press
January 3, 2021 156
काठमाडौँ । हाम्रो दैनिक जीवनमा रंगहरूको ठूलो महत्त्व हुन्छ। यदि संसारमा कुनै रंग हुने थिएन भने, संसार अन्ध्कार देखिनेछ।
त्यसैले प्रकृतिले र रगंको रूपमा हामीलाई अमूल्य उपहार दिएका छन्। मानव जीवन रंग बिना उजाड र सुनसान छ।
व्यक्ति र वरपरका प्रयोग गर्ने र आसपास रहेका रंगहरुले व्यक्तिमा ठूलो प्रभाव पार्दछ। र रंगको यस महत्त्वलाई बुझेर हाम्रा ऋषिहरुले धार्मिक रितिमा विभिन्न रंगको प्रयोगलाई समावेश गरेका छन्।
सिन्दुर, बेसार, मेहन्दी, धार्मिक कार्यहरूमा प्रयोग गरिन्छ। नयाँ ग्रहको पूजामा सूर्य र मंगललाई रातो रंगमा, चन्द्रमा र शुक्रलाई सेतो रंगमा, बुध हरियो, गुरू पहेंलो, शनि र राहु,केतु कालो रंगमा देखा पर्नेछ।
ज्योतिष, वास्तुकला र संख्याशास्त्रको दृष्टिकोणबाट पनि र रगंहरुले हाम्रो दैनिक जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ। तपाईंले धेरै चोटि महसुस गरिसक्नु भएको छ होला कि कहिलेकाँही हामीले गर्न खोजेका सबै कामहरु पुरा हुन्छ जब हामी विशेष रंगको शर्ट वा केही अन्य कपडा लगाउँछौं र हामी त्यो शर्टलाई लकी शर्टको नाम दिन्छौं।
वास्तवमा यो खेल रंगिको छ किनकि प्रत्येक रंग अरु कुनै न कुनै ग्रहमा सम्बन्धित हुन्छ। राशि चिन्हको आधारमा रंगीन लुगा लगाउनुले हाम्रो कामा मिल्ने सफलता काफी हदसम्म पुग्छ।
धर्मशास्त्रका अनुसार, कालो रंगलाई धेरै समयदेखि नै महत्त्वपूर्ण मानिदै आएको छ, यसले एक व्यक्तिलाई नकारात्मक उर्जाको प्रभावबाट मुक्त गराउँछ।
कालो रंगलाई सबै धर्ममा आँखाको दोषको संरक्षणकर्ता मानिन्छ। यो रंगलाई शनिदेवको चिन्हको रूपमा लिइन्छ।
यस रंगको साथमा मित्रता भनेको तपाई हरेक नराम्रो चीजबाट सुरक्षित हुनुहुन्छ। यसको साथै, कालो रंग हाम्रो ज्योतिषशास्त्रमा केही राशि चिन्हहरूका लागि धेरै शुभ मानिन्छ र यो रंगको लुगा लगाई सबै नकारात्मकहरू तिनीहरूको जीवनबाट हटाइन्छ‘ ।
त्यसोभए आउनुहोस् आज हामी कालो रंग शुभ हुने यस्ता ३ राशिका बारेमा बताउन जादैछौं जुन यी राशिका लागि अति नै शुभ हुन्छ।
मिथुन राशिको स्वामी ग्रह बुध हो। त्यसैले यस राशिलाई कालो रंग नै बढी मन पर्छ। यदि तपाई मिथुन राशी हुनुहुन्छ भने आजैबाट कालो रंगको बस्त्र धारण गर्न थाल्नुहोस ।
किनकि यसले जीवनमा आइपरेका नकारात्मक शक्तिहरुलाई कम गर्न मदत गर्छ। साथै जीवनमा अधिक सफलता पनि प्राप्त गर्न पनि सहायो पुर्याउछ। मिथुन राशि भएकाहरुले सकेसम्म कालो रंगको प्रयोग गर्नुलाई शुभ मानिन्छ।
कन्या राशिको राशि स्वामी बुध ग्रह हो , जसको कारण यस रशिका लागि कालो रंग शुभ मानिन्छ। कन्या राशिका लागि कालो रंग निकै नै खास रंग हो।
किनकी यो कन्या राशिको शुभ रंग पनि हो यसको अत्याधिक प्रयोगले आर्थिक स्थिति मजबुत हुनुका साथै उन्नति प्रगति हुन्छ। र जसले भाग्य पनि खोल्छ र ती मानिसहरू आफ्नो काममा सफल हुन्छन्।
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार मकर राशी भएकाहरुले कालो रंगको कपडा लगाउनु अति नै शुभ मानिन्छ साथमा यिनीहरु माथि सूर्यदेवको पनि असिम कृपा रहने बताईएको छ। कालो रंग सूर्यको शुभ रंग हो।
Nextभाइरल आमाछोरी दोहोरी गाउन इन्द्रेनीमा पुग्दा यस्तो भयो,श्रीमानलाई सम्झेर रूवाबासी-भिडियो हेर्नुहोस
घरको कुन दिशामा मन्दिर राख्दा, घरमा सँधै हुन्छ ईश्वरको बास !
गलत सुइ लगाएका कारण छोरी जन्मिएपछि दम्पतीले पाए १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पाए